Ogaden News Agency (ONA) – South Africa: O.Y.S.U oo Siminaar aqoon kororsi ah qabatay
South Africa: O.Y.S.U oo Siminaar aqoon kororsi ah qabatay
Posted by Daljir	/ December 23, 2013
Ururka Midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadeniya(OYSU) ayaa Siminaar ku saabsan tacadiyada uu gumaysiga Itoobiya u gaysto shacabka Ogadeniya , sida looga hortagi karro & Aqoon korarsi ku qabtay magaalada Johannesburg ee Dalka Koonfur Africa.
Simnaarkan waxaa ka sooqayb galay qaar ka mida xubnaha Jaaliyada Ogadeniya , Arday wax ka barata Jaamacadaha Dalka, Aqoon yahano, & Siyaasiyiin ka faalooda Arimaha Geeska Africa, waxaan ugu horayn hadal kooban ka jeediyay Xoghayaha Ururka OYSU Maxamed Qani oo u mahadceliyay intii isku sooduba riday Siminaarka wuxuuna u jeediyay xubnihii ka qaybqatay in ay door muhiima ka qaataan sidii looga hortagi lahaa Tacadiyada uu gumaysiga Itoobiya u gaysto shacabka Ogadeniya. Sidoo kale waxaa ka hadlay xiriiriyaha OYSU ee Koonfur Africa Axbaab Abdi wuxuuna sheegay in dadka rayidka ah ee Ogadeniya ay ku nool yihiin xaalad adag isaga oo sheegay in arintaas looga gudbi karro isku duubnaan & wada shaqayn.
Gudoomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee Dalka KoonfurAfrica Mudane C/raxman Siciid ayaa goobta ka soo jeediyay Barnaamij Sooyaalka Taariikhda Dalka Ogadeniya wuxuuna dhalinta ku booriyay isla markaana ku adkeeyay inay dhinac ka ahaadaan waxkasta oo Arimaha Halganka Lid ku ah . waxaana gobta laga sii daayay muuqaalo muujinaya Tacadigada & xasuuqa ay Ciidamada gumaysiga Itoobiya ka gaystaan dhamaan dhulka Somalida Ogadeniya,Waxaan meesha ka maqnayn qaybaha Suugaan Halgameedka Ogadeniya oo uu ka soo jeediyya Abwaan Khadar Colaad,Siminaarkan ayaa ugu dambeyntii ku dhamaaday jawi wanaagsan oo ay Xubnihii Qaatay ka faa’iidays-teen.
Ururka Midawga Dhalinyarada Iyo Ardayda Ogadeniya OYSU ee dalka Koonfur Africa ayaa xidhiidh wanaagsan la leh hay’adaha Dawliga ah & kuwa maxaliga ah ee Dalka Koonfur Africa ka hawlgala isla markaana lagu martiqaadaa golayaasha lagu falanqeeyo Arimaha Xuquuqul insaanka